Saraakiil ka soo goostay Al-Shabaab oo lagu soo bandhigay Sh/Hoose | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Saraakiil ka soo goostay Al-Shabaab oo lagu soo bandhigay Sh/Hoose
Saraakiil ka soo goostay Al-Shabaab oo lagu soo bandhigay Sh/Hoose
Qoryooley (Halqaran.com) – Dowladda Soomaaliya ayaa degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ay maanta ku soo bandhigtay Sarkaal ay sheegtay in uu Al-Shabaab u qaabilsanaa Aaga degmadaasi Qoryooleey, kaas oo isku soo dhiibay Ciidamada Dowladda.
Sarkaalkaan kasoo goostay Al-Shabaab ayaa waxaa degmada Qoryooleey ku soo dhaweeyay taliyaha Ciidamadda Madaniga ah ee degmada qoryooley Col. Cali Waal iyo Taliyaha Ciidamadda AMISOM.
Sidoo kale, Taliyaha waxaa uu sheegay in amniga ee Degmada Qoryooley uu yahay mid wanaagsan, isla markaana Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay sameeyaan howlgallo looga hortagayo weerarada Al-Shabaab.
Ugu dambeyn, Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa degaannada ay maamulaan waxaa ay siyaabo kala duwan ugu soo bandhigaan Saraakiil iyo Ciidamo uu midba midka kale sheego in uu isku soo dhiibay.
Saraakiil Al-Shabaab soo goostay